म जहाँ रहेपनि कार्यकारीसहितको शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु:वामदेव गौतम « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
म जहाँ रहेपनि कार्यकारीसहितको शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु:वामदेव गौतम
प्रकाशित मिति : २०७६, २१ मंसिर शनिबार २०:४४
–यो उपनिर्वाचनमा समग्रमा हामीले सबैभन्दा धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेका छौँ तर परिणामबाट हामी उत्साहित हुनुपर्ने जरुरी छैन । हामीले विगतमा जितेकामध्ये महत्वपूर्ण केही स्थान जोगाउन सकेनौँ । भक्तपुरको एक प्रदेशसभा सदस्य, धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र चितवनको एक वडाध्यक्ष पद गुमाएका छौँ । विगतमा हामीले गठनबन्धन गरेर चौतर्फीरुपमा विजय हासिल गरेको चितवन जिल्ला, जहाँ हाम्रो पार्टीका एक अध्यक्षको गृह जिल्ला पनि हो, त्यहाँ गुमाएका छौँ ।
अर्घाखाँची र दाङमा पनि केही स्थान गुमेका छन् । पार्टीको यही मङ्सिर १८ गतेको सचिवालय बैठकले समीक्षा प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ, त्यो प्राप्त भएपछि मङ्सिर २३ गतेका लागि तय भएको बैठकमा यसबारे छलफल शुरु हुनेछ । सरकारसहित हामी निर्वाचनमा जाँदासमेत पहिला जितेका स्थानहरु गुम्न पुगेका छन् । हामीले त्यो स्थानलाई जोगाउँदै नयाँ ठाउँमा पहुँच स्थापित गर्न सक्नुपर्नेमा त्यो सकेनौँ । नसक्नुले हामी सरकार र पार्टी काममा लोकप्रियताको कसीमा खाँटी हुन सकेको देखिँदैन । त्यसकारण निर्मम भएर समीक्षा गर्दा सरकार र पार्टीले जनभावनाअनुसार राम्रो काम नगरेको प्रस्ट देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा थप स्थान गुमाउनुपर्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।
– यो कुरा पनि हो कि पार्टी एकतापछि हाम्रो सङ्गठन तल्लो तहसम्म गएकै छैन र ‘ग्रासरुट’ त हाम्रो तलै छ । जहाँ, जोजो समर्थक वा कार्यकर्ता थिए, ती त्यहीँ छन् । कमिटीमा मात्रै नभएको हो मान्छे त त्यहीँ छन् । मत कमिटीले हाल्ने होइन, बालिग मताधिकारले मत दिएका हुन् । त्यही भनेर बस्ने हो भने त समीक्षा नै गर्न पर्दैन । आखिर हामीले किन उपनिर्वाचनमा पहिलाको जस्तो स्थान ल्याउन सकेनौँ ? यी सबै पक्षमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो गुम्न थाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, हामी सचेत हुनैपर्छ । समीक्षामा जाँदा अरू कुरा पनि आउन सक्लान् । कतिपय ठाउँमा अन्तरघात पनि देखापरेको छ । अन्तरघात भएकै छैन भन्ने होइन । खासगरी धरान उपमहानरपालिकामा यस्तो देखिएको छ । त्यहाँ मतदातामा जे जे कुरामा असन्तुष्टि थियो, त्यो कुरा आगामी दिनमा सच्याउन सक्छौँ भनेर भन्न सकिएन । स्थानीय तहले जनतामा बढी कर लगाएको भनेर मत कम आएको भनिएको छ । त्यो बढी कर पार्टीले लगाएको होइन, नगरपालिकाले लगाएको हो । यस्ता विषयमा एकीकृत पार्टी कमिटी समयमा कायम नहुँदा समयमा समीक्षा हुन पाएन तर नयाँ प्रमुख आएर ती कर एकाएक फिर्ता लिने वा नेकपाका अरू जनप्रतिनिधिको सहयोगबिना घटाउने भन्ने पनि हुँदैन । यी कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन । सरकारको लोकप्रियता जनतामा छैन वा सरकार आलोचनात्मक अवस्थामा छ भनिएको बेलामा समेत हामीले फेरि अधिकांश स्थानमा त जितेका छौँ । सरकारले कामै नगरेको भन्ने होइन । जस्तो सङ्घीय संरचनालाई खडा गर्नु यो सरकारको मुख्य उपलब्धि हो । कुरा यति हो कि तत्कालीन र जनतामा देखिने प्रकारका कतिपय काम गर्न सकिएन । विकास बजेटमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा दिनुपर्ने भएकाले पनि केन्द्र सरकारको काम कम देखिएको हो । पछिल्लो समयमा ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता वृद्धि गरेर रु तीन हजार बनाइएको छ । यो वृद्धि सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै गरिएको भए एक प्रकारको सुधार राम्रो हुन्थ्यो । बजेट र नीति, कार्यक्रम बनाउँदा ख्याल गर्न नसक्दा केही कमजोरी भएका छन् । यी सबै कुरामा हामीले आलोचनात्मकरुपमा जनतामा जान सकेनौँ । यसबीचमा नेकपाका पक्षमा रहेको जनमतलाई निरुत्साहित गर्ने कोसिस पनि भयो । यस्तो स्थितिमा पनि हामीले धेरै स्थानमा त जितेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा, उपनिर्वाचनमा हामीले रोइहाल्नुपर्ने वा लौन भूकम्पै गयो, वा केके भयो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन । जनताको सहानुभूति हामीसँगै छ तर सचेत चाहिँ हुनुपर्छ । यस अवस्थामा लोकप्रियताको कसीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने र जनताले जे चाहन्छन्, त्यो गर्ने गर्नुपर्छ ।
–अब नभ्याएर होला । सरकारको योजना पार्टीको कमिटीमा लगेर छलफल गरेर बाहिर ल्याउनु हुँदैन । योजना आयोग छ, संरचना छ, कहाँ पार्टीमा लगेर छलफल गर्ने भन्ने लागेर पनि होला । सरकारको नीतिगत समस्या र कार्यशैलीका बारेमा त मैले पहिला पनि लेखेर दिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । मैले जे जे कुरा सङ्केत गरेको थिएँ, त्यही देखिएको छ । तीव्र गतिमा काम गर्न सकिनथ्यो । देखिने गरी काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिएको छैन ।
प्रणालीको सुधारमा त तपाइँले बेलाबखतममा आफ्ना धारणा त मुखरित गर्दै आउनुभएको छ, सुधार गर्नुपर्ने देख्नुभएको हो ?
तपाइँ पार्टीको सङ्गठन विभागको प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । तपाईंको विभागले अहिले के काम गरिरहेको छ ?
तपाइँलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव केही अघि नै सचिवालय बैठकबाट पारित भएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?
तपाइँ राष्ट्रियसभामा जाने भन्ने पनि पछिल्लो समय सुनिएको छ, खास कुरा के हो ?
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यबीचको हैसियतमा असमानता छ भन्ने बुझाइ हो तपाइँको ?
तपाइँलाई धोका भयो उसो भए…?
तपाइँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ । लामो समय किसान आन्दोलनमा लाग्नुभयो । तपाइँले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजना सुनाउँदै आउनुभएको छ, तर लागू भएको देखिँदैन त ?
मुलुक कृषिप्रधान देश भए पनि कृषि उपजको अत्यधिक आयात भइरहेको छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ । हामीले हाम्रो देशमा उत्पाकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ३१ लाख हेक्टर जग्गालाई ३ करोड टुक्रामा बाँडेर हुँदैन । त्यसलाई चक्लाबन्दी गएर पैसामा परिणत गरिसकेपछि देख्नुहोस् कि यहाँ जति अहिले हामी बाहिरबाट जति कृषिजन्य पदार्थ किन्छौँ । त्योभन्दा बढी हामीले यही उत्पादन गरेर खान मात्र पुग्ने होइन कि बाहिर पनि निर्यात गर्दछौँ । दुर्भाग्य हो कि भाग्य हो । हरेक नयाँ विचारहरु र नयाँ मान्यता एवं सिद्धान्तका रुपमा यसरी चल्नैपर्छ भन्ने मैले भन्दै आएको छु तर ममाथि नै प्रहार हुन्छ । यो नेपाली जनतासँग ३०० बिलियन डलर पैसा छभन्दा धेरै पत्याउँदैनन् । पैसामा परिणत गर्ने मेरो विचार हो । सरकारले कतिको ग्रहण गर्नुहुन्छ थाहा छैन । तैपनि उहाँहरुले भन्नुहुन्छ । विचार त वामदेवकै राम्रो । तर लागू हुन्न र पो ।
तपाइँले अघि सार्नुभएका यस्ता सकारात्मक कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले लागू गरेको देखिएन त ?